West na Midwest Round II | Martech Zone
Izu gara aga, anọ m na otu panel na The Combine - 2010 akpọ Gaa West: Ndị bụbu Midwesters nke kwagara na Silicon Valley na-akọ akụkọ ha. Abụ m otu n'ime mmadụ anọ na-ekwurịta akụkọ nke anyị na ọ gbanye ọkụ na Twitter wee gaa Cat 4 mgbe Doug Karr tinyere mmeghachi omume ya mgbe ọ na-agbanyeghachi Jikọta 2010 Ebe a.
Echiche ndị a niile ziri ezi n'ihi ọdịdị adịghị mma nke usoro ahụ, nke chara acha maka ụda-na-ada ụda, mana ezughi oke maka ịkọwapụta ihe kwesịrị ka ihe karịrị 10 nkeji oge na-akparịta ụka na-enweghị isi. Doug Karr nwere amara dị ukwuu n'inye m ohere ịbanye n'ime mkparịta ụka a iji nye echiche m - ọ bụghị maka ihe gbadara na Combine - mana ịghachite ya site na arụmụka n'etiti West vs Midwest (mụ na ya dị ka Drago) na nke na-enyekwu omimi banyere ịchụ nta azụmaahịa ebe a na San Francisco na Midwest (n'ọnọdụ m Bloomington, IN).
Echere m na enwere nkuzi, dabere na nkatọ ziri ezi, nke nwere ike inye ohere na nke a maka anyị niile n'agbanyeghị akụkụ anyị nọ. E kwuwerị, nke a abụghị otu ogidi dị mkpa nke achụmnta ego?
Ekekọrịta Ahụmịhe Na-emetụta Obodo na Omenala Anyị
Community out West na Midwest dịcha mkpa na ọnọdụ abụọ ahụ, mana enwere apụl na oranges tụnyere ma a bịa n'ihe gbasara ike ha. Akụkọ m dabara na ọtụtụ ebe a: ịpụ na West bụ ihe atụ na-arụsi ọrụ ike nke nwere ọgaranya na akụkọ miri emi na mmepe nke mba anyị. N'adịghị ka Lewis na Clark, ọ dịghị onye ọ bụla taa na-agagharị n'elu mmiri, na-alụ ọgụ na-agba agba na ụzọ isi na-ebu agha India Nmụ amaala America, mana dị ka ha, anyị niile nwere otu uche yiri nke mbịakwute anyị - iso ndị mmadụ nwee, ihu ala yana anyị onwe anyị na erughị oke ka anyị tinyere ihe egwu ịhapụ ụlọ obibi anyị ma kwaga West. Ọ bụghị ọtụtụ n'ime anyị sitere ebe a, mana anyị na-ewulite obodo anyị site na ahụmịhe ndị a na-ahụkarị karịa nke ọdịnala dịka asụsụ, klas mmekọrịta akụ na ụba, agba na ịkpọ Kanye West asị.
Na Midwest, obodo bụ otu n'ime njirimara kacha sie ike na ọdịnala ọ bụla n'ụwa. Ndị mmadụ nọ na Midwest na-enwe mmasị inwe azụ ibe ha, na-ele ọbịa (ọ gwụla ma ị nọ na Ohio St - Mich football egwuregwu), na-arụkwa ọrụ ahụ mgbe niile na obere ịgba ọsọ dị ka o kwere mee (Ọ bụrụ na Mahadum Indiana na-etinye aha na azụ nke uwe ha, ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na Bloomington tụgharịrị ghọọ ikpo nke nzu nzu). Uche a nke obodo siri ike, ọ ga-abụ omume nzuzu ịhapụ ihe niile ka ị kwaga ebe ị ga-akwụ $ 1,700 kwa ọnwa iji biri na igbe akpụkpọ ụkwụ n'elu oke mmejọ na-arụ ọrụ.
Yabụ, obodo abụọ nwere njikọ siri ike, mana ụkpụrụ na ahụmịhe nke na -emepụta njikọ ndị ahụ na-eweta ụfọdụ elele na ọghọm dị na azụmaahịa. N'oge na-adịghị anya, Indiana nọ na ọghọm ugbu a.
Ewu na Regwọ Ọrụ
Na nnukwu okpuru Aha m abughi onye, protagonist "Ọ dịghị onye" (nke Terrance Hill na-akpọ) na-ewe obere mgbọ site na okpu ya na-egwu egwu site na Legendary gunslinger Jack Beauregard (nke Henry Fonda na-akpọ), iji gosipụta na ọ bụ ya. Mkparịta ụka ha gbanwere amamiihe:
Jack: Gwa m, gini bụ egwuregwu gị?
Onweghi: Mgbe m bụ nwata, m na-eme ka à ga-asị na m bụ Jack Beauregard.
Jack: … Ma ugbu a unu nile tolitere?
Onweghi: Ana m akpachapụkwu anya. Ma mgbe ụfọdụ ị na-agba obere ihe egwu, nwere ike iweta ụgwọ ọrụ, ya ma.
Jack: Ọ bụrụ na ihe egwu dị obere, ụgwọ ọrụ pere mpe.
Nnukwu ihe dị iche m na-arụtụ aka na ọdịbendị dị n'etiti West na Midwest dina n'ụzọ doro anya na usoro a. N'ime afọ 2 gara aga nke itinye aka na obodo weebụ na teknụzụ na Indy na Bloomington, enwere m ike ikwu n'eziokwu, nke a bụ nnukwu nsogbu Indiana nwere n'ịghọ Boulder na-esote ma ọ bụ Silicon Valley ọzọ. Nke a na-eme ọ bụghị pụtara na ọnweghị onye ọ bụla na-etinye ihe ize ndụ, ma ọ bụ na enweghi ihe ọ bụla bara uru na-eme na Indiana. Ma, ihe ọ pụtara, bụ na otu isi akụrụngwa nke iwulite mpaghara ọganiihu na-aga nke ọma emebeghị ka ọ zụta n'ime nnukwu echiche dị egwu.
Ọnọdụ dị oke mkpa na azụmaahịa ọ bụla ọgbara ọhụrụ bụ onye nrụpụta teknụzụ ma ọ bụ onye nrụpụta ụzọ (duh). Ọchịchọ maka ụdị ndị a karịrị akarị nke ha, nke a bụkwa eziokwu na San Francisco. Isi ihe dị iche na Indiana, bụ na ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke ndị nwere teknụzụ iji wuo ngwaahịa weebụ azaghachiwo na ọkọnọ a ma chọọ enweghị nha anya site na ịtọlite ​​"ụlọ ahịa dev" nke mmepe "nka". Nke a choro ndị ọchụnta ego na-abụghị teknụzụ ka ha kwụọ ụgwọ isi obodo ha niile akwụgoro na / ma ọ bụ ego iji kwụọ onye na-enweghị akpụkpọ egwuregwu. Agwaala m ọtụtụ ndị mmepe si Indy na Bloomington ndị na-akwụ ụgwọ dị ịtụnanya bụ ndị na-echekwa na ha bụ ndị ọchụnta ego n'ihi na ha na-edozi nsogbu mmalite. Ma ha abụghị n'ezie. Aren't bụghị onye ọchụnta ego ruo mgbe ị ga-ahapụ ọdụm gị, tụfuo okpu gị na onye ọ bụla ma chụọ àjà ruo mgbe ị mepụtara ihe na-emepụta uru ma na-akpata ego. Ọ bụrụ na ị tinye W-2 kwa afọ, ị bụghị ọchụnta ego.
Douglas Karr na ọtụtụ ndị ọzọ mere ihe ịtụnanya ọrụ guzosie ike Indy dị ka a Marketing Tech hotspot. Nke ahụ dị egwu. Agbanyeghị, ndị nrụpụta ndị ọzọ na-achọ iwu Facebook / Google / wdg na-esote, chọrọ ezigbo nkà na ụzụ. Ọ bụ ebe a, mana anaghị ekenye ya nke ọma na ihe mkpali anaghị esonye. Amaara m ọtụtụ ndị na-abụghị oru oru buu igba n'ulo na Indiana na-achọsi ike dev talent na enweghị ike inweta ya ma ọ bụrụ na ha na-akwụ ego ma ọ bụ nye hara nhatanha na-agaghị anọ n'ụlọikwuu ozugbo ọ na-agbala. Yabụ, Indiana ka na-efunahụ ndị ọchụnta ego a nwere oke ikike San Francisco na Ndagwurugwu n'ihi na conundrum anaghị adị na ọnụọgụ na-enweghị oke ebe a. Anaghị m ekwu na ị "enweghị ike ịga nke ọma belụsọ ma ịkwaga West." Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ ụzọ siri ike maka ndị na-abụghị ndị ọrụ teknụzụ ịchọta ndị na-arụ ọrụ na teknụzụ ha ga-asọmpi na mmalite na ụlọ ọrụ ndị si West na-enweghị otu okwu ahụ.
Ezigbo ozi ọma maka Indiana. Ihe na - ebido nwayọ nwayọ, echeghị m na nke a ga - abụ nsogbu n’ogologo. Ogologo ole? Amaghị m, mana ọ bụrụ na m bụ ọchụnta ego na Indiana nke na-achọghị ịkwaga West, m ga-akụ ịnyịnya a ruo mgbe ọ ga-ebelata ka ọ bụrụ ikpo molekul.
Tags: ikpokọtaIndianamidwestọdịda anyanwụ
Social Media Survey Part 2 - A Anya Anya na Facebook
Sep 15, 2010 na 5:14 PM
@dougheinz ị bụ ezigbo nwa nwoke, Doug. Enwere m ekele maka ọkwa nchekwube na echiche dị egwu ị dubara na mkparịta ụka a. Amaja m kwuo, ị nwere ezigbo nchekwube karịa ụfọdụ olu dara ụda midwest bụ ndị batara ịbara m mba na post m. Daalụ maka iwe oge!
Dustin Sapp kwuru
Sep 15, 2010 na 7:13 PM
"West vs Midwest Round II" - nnukwu post site na @dougheinz na blọgụ @ douglaskarr.
Sep 16, 2010 na 2:06 PM
M laghachiri Indianapolis mgbe afọ 3 1/2 nọ na New York City iji sonyere Raidious. E nwere otu ihe ịrịba ama nke nchekwube n'ebe ahụ.
Mgbe mbụ m kwagara ebe ahụ, enwere m mgbawa n'ubu m banyere otu anyị si dị mma ebe a dịka ebe ọ bụla. Amụtara m ngwa ngwa na nke ahụ bụ eziokwu, mana ị na-ekwu maka ya na-eme ka ị daa ụda mpaghara.
Onye isi m enweghị ike ikwenye na m si na Midwest n'ihi na m "na-eje ije ngwa ngwa, na-ekwu okwu ọsọ ọsọ," Ana m ekwu okwu na aka m, "m na-achịkwa nke ọma." Ihe ndekọ akụkọ m nwere na ntanetị enweghị ike ịbịaru ọdịdị nke steeti Indiana. Ndị a bụ ndị abụọ NYC lifers.
Ọ bụ ezie na talent na-agagharị n'enweghị nsogbu, ọdịbendị na-esite n'otu mpaghara abụọ. Nke ahụ bụ eziokwu. Otutu oge, talent na-agbaso usoro omumu a n'otu n'ime uzo abuo a.
Iwe iwe na igosi onwe gị onye ezi omume abụghị ụzọ isi laa. Ọmarịcha ọrụ, Doug. Olu gị masịrị m.
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla, mee ka ha na New York. Oge obula onye obula nwere obi abuo banyere gi, gwa ha ju onwe ha.
Sep 16, 2010 na 3:16 PM
Daalụ nwoke. Nke gi bu akuko mara nma banyere ihe n’eme mgbe ndi mmadu site na ebe di iche-iche ma ndi ozo di iche iche na ezukọta ma gabiga ihe ndi ahu. Ndụ siri ike ibi ndụ dịka echiche, ọ bụghị ya?